ယနေ့အချိန်ထိ ငယ်ရုပ်လုံးဝမပျောက်ဘဲ ကြီးပြင်းလာပြီး နုပျိုနေဆဲဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချော အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ ငယ်ဘဝပုံရိပ်လေးများ – Shwe Likes
ယနေ့အချိန်ထိ ငယ်ရုပ်လုံးဝမပျောက်ဘဲ ကြီးပြင်းလာပြီး နုပျိုနေဆဲဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချော အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ ငယ်ဘဝပုံရိပ်လေးများ
Shwe | November 25, 2021 | Celebrity | No Comments
ပြည်သူ ချစ် သရုပ်ဆောင် နိုင်ငံကျော် ထပ်ဆင့်အ က ယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့ အပီပိုင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ေ ဆာင်ချက်တွေ နဲ့အတူ ကျရာဇာတ်ေ ကာ င်တိုင်းမှာ အကော င်းဆုံးသရုပ်ဆော င်နိုင်တာကြောင့် ပရိတ်သတ်ကြီးေ တွရဲ့ချစ်ခ င်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ၊အပြည့်အဝ ရရှိထားတဲ့ မင်းသ မီးချောလေးပြဲ ဖစ်ပါတ ယ်။
အနုပညာေ လာကမှာ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုဇာ တ်ကောင်းပေါင်းများ စွာကို ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုေ တွနဲ့အနုပညာ လမ်းကြော င်းမှာ လျှောက်လှ မ်းခဲ့တာ ယနေ့ထိ တိုင်ပါပဲ။ မ င်းသားေ ချာပြေတီဦးနဲ့အေး ချမ်းသာ ယာတဲ့အိမ်ေ ထာင်ရေးလေးကို ထူထောင်ကာ ချစ်စရာေ ကာင်းလွန်းတဲ့ သား သားမီးမီးလေးတွေနဲ့အေး ချမ်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူေ လးလည်းြ ဖစ်ပါတယ်။
အခုလက်ရှိြ ဖစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအေြ ခအနေေ တွမှာ ဆိုရင်လည်း အိန္ဒြာကျော်ဇင် က ပြည်သူလူထု နဲ့တစ်သားတည်း ရပ်တည်ခဲ့ တာပဲဖြစ်ပါတယ်.။ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ဟာဆိုရင် နွေဦးတော်လှ န်ရေးရဲ့လူထုလှု ပ်ရှားမှုမှာ လည်း တက်တက်ကြြွ ကွနဲ့လမ်း မပေါ်ထွ က်ကာလွတ် လပ်စွာနဲ့ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုပါဝင်ခဲ့ တဲ့အတွ က်ကြောင့် ပုဒ်မ၅၀၅ က နဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦးနဲ့အတူ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါ တယ်။အောက်တို ဘာလ၁၈ ရက်နေ့က ပုဒ်မ (၅၀၅ က)နဲ့ အမှုဖွင့် ခံရတဲ့ အနုပညာရှင်တချို ့ကို အမှုပိတ်သိမ်းေ ကြာင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ အကျဉ်းကျ ခံနေရတဲ့ ထင်ရှားတဲ့အနုပ ညာရှင်တြွေ ဖစ်ကြတဲ့ အကယ်ဒမီ ပြေတီဦး၊ အကယ်ဒမီအိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့တော့ မပါလာသေးပါဘူး။
အိန္ဒြာကျော် ဇင်ကို မွေးမွေး ကတည်းက “… အူဝဲ အူဝဲ…. ” လို့ ပီပီသသ အသံဆာဆာနဲ့ငိုခဲ့လို့ “အူဝဲ” ဆိုပြီး အိမ်ခေါ်အ မည်လေးတွင်ခဲ့တဲ့ သူပဲဖြစ်ပါတ ယ်။ မအူဝဲက အသက် 44 နှစ်ကျော်နေပေမယ့်လည်း ဖက်ရှင်ဘု ရင်မအဖြစ်အားလုံး ကအသိအမှတ်ြ ပုခြင်းခံရသလိုနု ပျိုလှပပြီး ချစ်စရာေ ကာင်းနေတဲ့သူဆိုလ ည်း မမှားပါဘူး။
ဘယ်အသက် အရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် မအူဝဲက နုဖက်နေပြီး ငယ်ငယ်ကတည်းက အရမ်းချစ်ဖို့ေ ကာင်းနေတာဖြစ် ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း မအူဝဲရဲ့ ငယ်ငယ် တုန်းကပုံလေးမြ င်တွေ့ရအောင်လို့ ပြန်လ ည်မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်။
ျပည္သူ ခ်စ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ နိုင္ငံေက်ာ္ ထပ္ဆင့္အ က ယ္ဒမီ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ကေတာ့ အပီပိုင္နိုင္တဲ့ သ႐ုပ္ေ ဆာင္ခ်က္ေတြ နဲ႔အတူ က်ရာဇာတ္ေ ကာ င္တိုင္းမွာ အေကာ င္းဆုံးသ႐ုပ္ေဆာ င္နိုင္တာေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ႀကီးေ တြရဲ့ခ်စ္ခ င္အားေပးမႈကို အခိုင္အမာ ၊အျပည့္အဝ ရရွိထားတဲ့ မင္းသ မီးေခ်ာေလးျပဲ ဖစ္ပါတ ယ္။
အႏုပညာေ လာကမွာ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ ဗီဒီယိုဇာ တ္ေကာင္းေပါင္းမ်ား စြာကို ရိုက္ကူးခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈေ တြနဲ႔အႏုပညာ လမ္းေၾကာ င္းမွာ ေလၽွာက္လွ မ္းခဲ့တာ ယေန႔ထိ တိုင္ပါပဲ။ မ င္းသားေ ခ်ာေျပတီဦးနဲ႔ေအး ခ်မ္းသာ ယာတဲ့အိမ္ေ ထာင္ေရးေလးကို ထူေထာင္ကာ ခ်စ္စရာေ ကာင္းလြန္းတဲ့ သား သားမီးမီးေလးေတြနဲ႔ေအး ခ်မ္းတဲ့ မိသားစုဘဝေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူေ လးလည္းျ ဖစ္ပါတယ္။
အခုလက္ရွိျ ဖစ္ေပၚေနတဲ့ နိုင္ငံေရးေၾအ ခအေနေ တြမွာ ဆိုရင္လည္း အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ က ျပည္သူလူထု နဲ႔တစ္သားတည္း ရပ္တည္ခဲ့ တာပဲျဖစ္ပါတယ္.။ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ ဟာဆိုရင္ ေႏြဦးေတာ္လွ န္ေရးရဲ့လူထုလႈ ပ္ရွားမႈမွာ လည္း တက္တက္ၾကျြ ကြနဲ႔လမ္း မေပၚထြ က္ကာလြတ္ လပ္စြာနဲ႔ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုပါဝင္ခဲ့ တဲ့အတြ က္ေၾကာင့္ ပုဒ္မ၅၀၅ က နဲ႔ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေျပတီဦးနဲ႔အတူ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရပါ တယ္။ေအာက္တို ဘာလ၁၈ ရက္ေန႔က ပုဒ္မ (၅၀၅ က)နဲ႔ အမႈဖြင့္ ခံရတဲ့ အႏုပညာရွင္တခ်ိဳ ့ကို အမႈပိတ္သိမ္းေ ၾကာင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေပမဲ့ အက်ဥ္းက် ခံေနရတဲ့ ထင္ရွားတဲ့အႏုပ ညာရွင္ေႂတြ ဖစ္ၾကတဲ့ အကယ္ဒမီ ေျပတီဦး၊ အကယ္ဒမီအိျႏၵာေက်ာ္ဇင္တို႔ေတာ့ မပါလာေသးပါဘူး။
အိျႏၵာေက်ာ္ ဇင္ကို ေမြးေမြး ကတည္းက “… အူဝဲ အူဝဲ…. ” လို႔ ပီပီသသ အသံဆာဆာနဲ႔ငိုခဲ့လို႔ “အူဝဲ” ဆိုၿပီး အိမ္ေခၚအ မည္ေလးတြင္ခဲ့တဲ့ သူပဲျဖစ္ပါတ ယ္။ မအူဝဲက အသက္ 44 ႏွစ္ေက်ာ္ေနေပမယ့္လည္း ဖက္ရွင္ဘု ရင္မအျဖစ္အားလုံး ကအသိအမွတ္ျ ပုျခင္းခံရသလိုႏု ပ်ိဳလွပၿပီး ခ်စ္စရာေ ကာင္းေနတဲ့သူဆိုလ ည္း မမွားပါဘူး။
ဘယ္အသက္ အရြယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ မအူဝဲက ႏုဖက္ေနၿပီး ငယ္ငယ္ကတည္းက အရမ္းခ်စ္ဖို႔ေ ကာင္းေနတာျဖစ္ ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးလည္း မအူဝဲရဲ့ ငယ္ငယ္ တုန္းကပုံေလးၿမ င္ေတြ႕ရေအာင္လို႔ ျပန္လ ည္မၽွေဝေပးလိုက္ ပါတယ္။
သားငယ်လေး ချစ်ချစ်တုန် ရဲ့(၄)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ သားလေးပုံေ လးနဲ့အတူ မွေးနေ့ဆုတော င်းပေးလို က်တဲ့ အာဇာနည်
ကျွန်းလေးတကျွန်းပေါ်မှာ သာသာယာ ယာအနားယူရင်း ချစ်သူနဲ့အတူတူ နှစ်သစ်ကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနေတဲ့ M ဆိုင်းလု
အကိုဖြစ်သူ ရေမွန် နဲ့ပတ်သက်ပြီး အောင်လပြောလိုက်တဲ့ စကားတွေကြောင့် သူမတို့ သားအမိဒုက္ခရောက်ရတော့မယ့် အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ လပြည့်ကဗျာ